एक वर्षमै तोलामा १४ हजार बढ्यो सुनको मूल्य, किन भयाे यस्ताे ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/एक वर्षमै तोलामा १४ हजार बढ्यो सुनको मूल्य, किन भयाे यस्ताे ?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा एक वर्षमा १३ हजार आठ सय रुपियाँले मूल्य वृद्धि भएको छ।
सोमबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ हजार तीन सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ हजार रुपियाँ पुगेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा राधा चालिसेले लेखेकी छन्।
अघिल्लो वर्ष २०७५ पुस १४ गते सुनको मूल्य प्रतितोला ५९ हजार पाँच सय रुपियाँ थियो । उक्त महिनामा यसको अधिकतम मूल्य ६० हजार सात सय रुपियाँ कायम भएको थियो।
गत असोजमा सुनको मूल्य बढेर ७३ हजार पाँच सय रुपियाँसम्म पुगेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भन्छन्, अबको केही दिनमा नयाँ रेकर्ड बनाउने सङ्केत देखापरेको छ। सुनको मूल्य आश्चर्यजनक रूपमा वृद्धि हुनेमा आन्तरिक कारण मात्र चाँहि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।’
अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यसको मूल्य प्रतिऔँस करिब एक हजार दुई सय अमेरिकी डलर कायम भएको थियो । सोमबार भने एक हजार ५१२ डलरभन्दा बढीमा पुगेको छ। सुनसँगै नेपाली बजारमा डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि नेपालमा अधिक मूल्य वृद्धि हुन पुगेको हो।
सुनसँगै चाँदीको पनि मूल्य बढेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा प्रतितोला ७६५ रुपियाँमा किनबेच भएको चाँदीको मूल्य सोमबार ८९० रुपियाँ कायम भएको छ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले रक्षामन्त्री पोखरेललाई लेखिन यस्तो पत्र, केछ पत्रमा ?
कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिकाले नेपालकै उत्कृष्ट नगरपालिकाको पुरस्कार हात पार्यो
नेपालमा पहिलो पटक एकै दिन थपिए १ हजार १६ कोरोना संक्रमित
पशुपतिनाथमा अब पूजा गर्न पाइने, मन्दिर खुला गर्ने तयारी
राजदूत लीलामणि पौडेलसँग सीआईबीले सोध्यो- बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा तपाईंको भूमिका के थियो?